rocky - Synonyms of rocky | Antonyms of rocky | Definition of rocky | Example of rocky | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for rocky
Top 30 analogous words or synonyms for rocky
Rockabilly လာခဲ့သည်။ Rocky Burnette သည် rockabilly ဟူ၍ ဆင်းသက်လာသည်ဟု သူ၏ website တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Rockabilly Boogie ဟုအမည်တွင်သည့်နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် အနုပညာရှင်ရာနှင့် ချီ၍ ပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်။
Rockabilly Rockabilly ဟုသော ဝေါဟာရကို ၁၉၅၆ နိုဝင်ဘာတွင် "RockaBilly Gal" ဟူသောသီချင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ Johnny နှင့် Dorsey Burnette တို့သည် ၁၉၅၆ ဇူလိုင် ၄ တွင် "Rock Billy Boogie" တွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ သီချင်းသည် Johnny ၏သား Rockyနှင့် Dorsey ၏သား Billy တို့၏ မွေးနေ့ကို ရည်ညွန်းသည်။ သူတို့သည် ၁၉၅၃ တွင် တစ်ချိန်တည်းတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သီချင်းသည် ၁၉၅၆ တွင် New York City တွင် Gene Vincent တွင် ဖျော်ဖြေရာမှ တေးစုများမှ အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Rocky Burnette သည် rockabilly အနုပညာရှင်များမှ တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်
ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေများ အမေရိကန် အဆိုတော်-တေးရေးဆရာ ဂျွန်ဒန်းဗားက ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် အက်စ်ပန် အနီးက တောင်တန်းတွေဘက်ဆီ မိသားစုနဲ့ အပျော်စခန်းချခရီးထွက်ခဲ့စဉ်က ပါဆီးအစ် ကြယ်ကြွေမှု ဖြစ်စဉ်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံကို သူ့ရဲ့သီချင်း "Rocky Mountain High" မှာ "I've seen it raining fire in the sky" လို့ ရည်ညွှန်း စပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Wayback Machine Wayback Machine သည် Internet Archive မှ ဖန်တီးထားသော အင်တာနက်ပေါ်ရှိ World Wide Web ၏ မော်ကွန်းတိုက်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကိုယ်ကျိုးမယူသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လ်ဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဆန်ဖရန်စ္စကိုမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ Internet Archive သည် Wayback Machine အား ၂၀၀၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ Wayback Machine သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်းက ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ၏ cached စာမျက်နှာများကို သိမ်းဆည်းလာခဲ့ကာ ဖန်တီးသူ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ အင်တာနက်ရှိ ဝဘ်ဆိုဒ်စာမျက်နှာအားလုံးကို သိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ "Wayback Machine" ဟူသောနာမည်သည် "The Rocky and Bullwinkle Show" ဟူသော ရုပ်ပြကာတွန်းမှ အချိန်ခရီးသွားစက်ကို ရည်ညွန်းထားသည်။
ကန်းထရီးရော့ခ် Country rock သည် ၁၉၆၀ နောက်မှ ကယ်လီဖိုးနီးယားဂီတဖြစ်ရပ်မှ ကျော်ကြားလာသောပုံစံ ဖြစ်သည်။ Hearts and Flowers, Poco နှင့် New Riders of the Purple Sage စသောတီးဝိုင်းများ ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ Byrds ၏နောက်လိုက်ဖြစ်သော Beau Brummels နှင့် Nitty Gritty Dist Band တို့လည်း ပါဝင်သည်။ ဖျော်ဖြေသူများကြောင့် country သီချင်းများ ပြန်လည်ခေတ်ဆန်းလာသည်။ The Beatles (Rocky Raccoon နှင့် Octopus’s Garden (Abbey Road (၁၉၆၉) Everly Brothers (Roots album (၁၉၆၈) တို့ပါဝင်သည်။ Mike Nesmith သည် The Monkees တီးဝိုင်းနှင့်အတူ country သီချင်းများကို လေ့လာခဲပြီး First National တီးဝိုင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Neil Young သူ၏ အသက်မွှေးလုပ်ငန်းမှ အနားယူခဲ့သည်။ အနုပညာရှင်အများစုသည် country မှ rock ဆီသို့ ဦးတည်ခဲ့သည်။
ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများ ဂျူပီတာဂြိုဟ် နှင့် စေတန်ဂြိုဟ် တို့တွင် အဓိကအားဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ဟီလီယမ်ဓာတ်ငွေ့များပါဝင်သည်။ , with heavier elements making up between3and 13 percent of the mass. Their structures are thought to consist of an outer layer of molecular hydrogen, surroundingalayer of liquid metallic hydrogen, withaprobable molten core witharocky composition. The outermost portion of the hydrogen atmosphere is characterized by many layers of visible clouds that are mostly composed of water and ammonia. The metallic hydrogen layer makes up the bulk of each planet, and is described as "metallic" because the great pressure turns hydrogen into an electrical conductor. The core is thought to consist of heavier elements at such high temperatures (20,000 K) and pressures that their properties are poorly understood.